Hamba uye e-Praia 1, izinyathelo ezimbalwa ukusuka ogwini lolwandle lwe-campeche!
Indlu ethokomele enekamelo elilodwa, amamitha ambalwa ukusuka ePraia do Campeche, umoya womndeni onendawo yokupaka yamahhala. Indlu ine-air conditioning (ebandayo) ezimbili, isitofu sikagesi esinezibasi ezimbili, ifriji, imicrowave, igedlela likagesi, umenzi wamasangweji kagesi, izitsha zasekhishini, izitsha nezinto zokusika. 32 intshi smart tv. Izihlalo ezimbili zasolwandle kanye nesambulela. Iphinde ibe ne-inthanethi engenantambo kuwo wonke amagumbi. Asizamukeli izilwane ezifuywayo.
Noma nini lapho kungenzeka, ngizotholakala ukuze ngikunike isiqondiso, amathiphu nosizo.